Haweeney Ganacsato ah oo xalay lagu dilay magaalada Baydhabo – STAR FM SOMALIA
Haweeney Ganacsato ah oo xalay lagu dilay magaalada Baydhabo
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay xalay ku dileen Haweeney Ganacsato aheyd oo laga yaqaanay magaalada.
Sida ay sheegayana wararka kooxo bastoolado ku hubeysan ayaa haweeneydan ku dilay Xaafada Mursal, iyadoo gacanta lagu dhigay mid ka mid ah kooxihii dilka geystay.
Taliyaha Qeybta Booliska Gobolka Baay Mahad C/raxmaan Aadan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku hayana qofkii dilka ka dmabeeyay, cadaaladana la soo taago.
Dilkan xalay ka dhacay magaalada Baydhabo ayay dadku hadal hayaan, iyadoo muddo sanad iyo bilooyin ah aysan magaalada ka dhicin wax dilal ah.
Sanad ka hor ayaa magaalada Baydhabo qarax dad badan ku dhinteen, iyadoo tan iyo mudadaas xaalada ammaan ee magaalada Baydhabo ay aheyd mid wanaagsan.
Ra’iisal Wasaare Khayre oo ballanqaaday qofkii lagu helo musuq maasuq inuu tallaabo ka qaadayo
Qaramada Midoobay oo ka hadashay ansixinta Ra’iisal Wasaaraha cusub